Uhlaziyo lwamva nje lufika kwi-Nexus 6P kunye ne-Nexus 5X | I-Androidsis
Kwangoko kulo nyaka kwavezwa ukuba yiNexus bebengazukufumana uhlaziyo kwiPie yePie. Iindaba ebezilindele ukuba ukuphela kwezi modeli bekusekude, ngoku uGoogle ebejolise kwimizamo yakhe kuluhlu lwePixel. Kwaye umhla ufikile ukusukela namhlanje i-Nexus 6P kunye ne-5X zifumana uhlaziyo lwamva nje.
Abasebenzisi bakaGoogle baqinisekisile iminyaka emibini yohlaziyo lwenkqubo kunye neminyaka emithathu yohlaziyo lokhuseleko. Into abayizalisekisileyo ngokugqibeleleyo, kwaye iphela namhlanje, ngokufika kohlaziyo lwamva nje lokhuseleko lweNexus 6P kunye neNexus 5X.
Ukuhlaziywa kwezokhuseleko isiqwenga sokhuseleko sikaNovemba kwaye isekwe kwi-Android 8.1 Oreo, eluhlobo lwamva nje lwenkqubo yokusebenza efunyenwe ziifowuni, sele ekupheleni konyaka odlulileyo. Luhlaziyo olufikelela kubasebenzisi nge-OTA.
Ukusuka kulo mzuzu, Emva kokufumana uhlaziyo lwamva nje lokhuseleko, i-Nexus 6P kunye ne-Nexus 5X azikhuselekanga. Abasayi kuphinda bafumane uhlaziyo. Ukusukela oko umjikelo uGoogle waqinisekisa abasebenzisi ufikelela esiphelweni. Olunye ukhetho kubasebenzisi kukuhlaziya iifowuni kunye neeROM zesiko.
Kukho ithuba lokuba uGoogle azinikele ekwandiseni ixesha lokhuseleko kwezi Nexus 6P kunye ne-Nexus 5X, nangona kungaziwa ukuba bazokuyenza okanye abayenzi ekugqibeleni. Okuninzi kunokuthethwa ngo-Novemba. Okanye banokukhulula ii-patches ezithile, kwimeko apho kukho isoyikiso esibi ngakumbi.
Asazi ukuba izinto ziya kuguquka njani, kodwa kuyacaca ukuba Kancinci umjikelo wale Nexus 6P kunye neNexus 5X ufikelela esiphelweni. UGoogle ujolise kumandla akhe kuluhlu lwePixel, olubonakala luqhuba kakuhle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Nexus » I-Nexus 6P kunye ne-Nexus 5X zifumana uhlaziyo lwazo lwamva nje
ICaprice, usetyenziso lukanomathotholo olungalibalekiyo ngesitayile ngaphandle kweentengiso